(Sheekadan Waxa SDWO.COM ka Akhriyey in ka badan 139 kun oo qof)
Qisada buugan cusub ee lamagac baxady (waxay lamaanaysay laba qof oo aad nolosha ugu kala fogaaday).
Qaybtii 7aad waxay inoo joogtay Salma oo telefan u dirtay Subeer, salaan ka dibna kelmadahan hoose ku qoran hadalkeedii ku biloowday:
Agtaada markaan imaado
Uurkaygu wuxu jeclaa
waxaan ku odhan lahaa
afkaan kala maagayaa,
warkaygan iidheh iyo
laakiin haddii aan kuu guudmaro waayihii ila kulmay muddadii aynu kala maqnayn ma aha sheeko aan caawa iyo dhawr habeen oo kale toona kuu dhammaystiri karayo, balse waxaan kuu taataabanayaa inta ugu muhiimsan.”
Dabadeedna Salma waxay ka warantay waayaheedii, waxayna tidhi:
“Waad ogayd oo halkan waxaanu iska raacnay inaabtigay Mursal oo ahaa wiilkii ay reerkayagu igu dareen, dabadeedna markii aanu Jarmalka tagnay waxaa khasab igu noqotay inaan aqbalo guurkiisa, maadaama ay hawsha hooyaday ku xidhan tahay, isla markaana ay waalidkay igu cadaadiyeen.
Sidaa darteed, markaan Jarmalka tegay waxaan la aqal galay Mursal oo aan ooridiisana noqday, laakiin markii aanu muddo wada joognay waxa soo yaraatay muxubadii iyo rabitaankii dhexdayada, ilaa ay arrintayadu markii dambe gaadhay in aanu isku dhacno oo aanu si weyn isu qabano, wuxuna aakhirkii isqabadkayagu gaadhay inaanu noqono dad ku kala nool laba meelood, waxaananu kala maqnayn hadda ilaa labo sannadood iyo badh.
Sidaan u malaynayo inaan kuu sheegay Mursal gabadh Jarmal ah ayaa u dhashay laba carruur ah oo hadda dad waaweyn ah, laakiin gabadhaa waqti hore ayey is fureen, balse carruurtii markii ay maqleen inuu aabbahood gabadh kale guursday ayey ka shaqeeyeen sidii ay aabbahood iyo hooyadood isugu celin lahaayeen, wayna ku guulaysteen inay aabbahood iyo hooyadood dib isugu guuriyaan.
Arrintaasi markii ay dhacday ayaan ka tegay Mursal, waxaanan intii muddadaa ka dambeeyey si keli ah ugu noolaa magaalo kale oo aan ahayn magaalada uu Mursal degan yahay.
Muddadii aanu kala maqnayn aniga iyo Mursal wax xidhiidh ahi nama dhexmarin, waayo isna ilama soo xidhiidhin, aniguna uma aan baahnayn inaan la xidhiidho, imikana ma jirto wax caqiibo ah oo na dhexyaal.
Sidaa darteed waxa keliya ee aan hadda sugayaa waxa weeye inaan warqadaydii ka helo. Ta kale haddii aan kaaga jawaabo su’aashaadii ahayd immisa carruur ah ayaad Mursal u dhashay, “Wallaal ma jirto wax ubad ah oo aanu isu leenahay aniga iyo Mursal, waayo muddo dheerna waanu kala maqnayn oo meel ku maanu wada noolayn, muddadii aanu wada joognayna Illaahay ubad nama kala siin, sidaa darteed wax carruur ah ma lihi.”
Salma markii ay iska waayo warantay, waxay u gudubtay dhinaca Subeer, waxayna tidhi:
“Wallaal Subeer wixii ka dambeeyey isqabadkayagii aniga iyo Mursal, waxaan jeclaa mar walba inaan kula soo xidhiidho, laakiin waan kugu soo dhici waayey, waayo markasta oo aan damco inaan kula soo xidhiidho, waxaan xusuusanayey sidii foosha xumayd ee aan kaa yeelay, taas ayaana sababtay inaan kugu soo dhici waayo.”
Salma waxay hadalkeeda ku soo afjartay "kuu badiyaye intaa ayaan ku dhaafayaa xog warankaygii la xidhiidhay waayihii I soo maray muddadii aynu kala maqnayn ee adiguna iska waran.”
Salma waxay hadlaysay in ka badan saacad iyo shan iyo toban daqiiqo, intaana Subeer waa ka gurayey oo mar qudha kama dhexgelin, waayo Subeer aad buu u xiisaynayey sheekada Salma, maxaa yeelay waxay ka waramaysay arrin muhiim ah oo uu Subeerna warkeeda doonayey.
Arrintu sida ay doonto ha ahaatee, waxa hadalkii la wareegay Subeer, wuxuuna ku billabay:
“Horta Salmaay ma dhacaan waxaan Illaahay qorini ee taa ogsoonow, aniguna waan ogsoonahay.
Ta kale anigu ma ilawsani inaan ku jeclaa, adna aad i jeclayd, balse hore ayaa loo yidhi nina calaf aan loo qorin iyo qadar Alle ma dhaafo, umana arko inaad wax qalad ah iga gashay.
Duruufaha iyo waayaha kula kulmayna waa wax dunidaba ka dhaca, adduunkana haddii uu qof waliba waxa uu doono yeelayo oo aan cidi ka hor imanayn, cidiba isma qabateen, markaa wallaal aniga waxba taa ha iga raaligelin, hana ka tiiraanyoon ee iskaga gudub.”
Subeer markuu intaa yidhi ayuu isna iska xog warramay, wuxuna yidhi:
“Aniga waadigii halkan igaga tagey, markii aad tagteyna waxay reerkayagu igu billaabeen guurso, taas oo uu odayga aabbahay iigu darnaa, aniguna waxaan isla soo taagay guur nafsad uma hayo, sidaa darteed markii aanu aniga iyo odayga muddo isla kadeednay ee odayguna i lahaa guurso, aniguna aan marba jar isku taarayey ayaan maalintii dambe odayga ku idhi Aabbe waxbarasho debeddeed ii dir, marka aan soo dhammaystana aan guursado, taas ayuu iga aqbalay, dabadeedna sidii ayaan ku tegay dalka Baakistaan, halkaas oo aan ku dhammaystay Jaamacadda Dhaqaalaha, waxaanan dib ugu soo noqday dalka, balse tan iyo markii aan soo noqday waxa jawaabteeda la iga sugayaa arrintii ahayd inaan guursado marka aan Jaamacadda soo dhammeeyo, illaa haddana kama jawaabin, mana hayo wax aan kaga jawaabo."
Sidaa darteed Salmaay ilaa hadda maan guursan, dabadaana guur daayoo, xataa gabadh lamaan sheekaysan.
Hase yeeshee marka la eego culayska iga saaran xagga reerkayaga iyo jawaabta sannadaha badan la iga sugayey, waxa hadda xaaladu taagan tahay marxalad ay lagama maarmaan tahay inaan waalidkay jawaab ka siiyo arrinta guurkayga, taas oo noqonaysa inaan guursado, wallow aanan ilaa hadda gabadh aan guursado haynin, balse waxay doonto ha noqotee, waan ku khasbanahay inaan guursado.”
Markii uu Subeer hadalka halkaa marrinayey ayey Salma ka soo dhexgashay, waxayna su’aashay sababta uu dabadeed gabadh kale ula sheekaysan waayey ee ka horjoogsaday, waxa gabadh qurux badan magaalada is luleysa.
Subeer waxa uu ugu jawaabay:
"anigu mar baan cid calmaday midii aan caashaqayna, calafkaa isku kaayo diiday oo hore waxa loo yidhi ma cuntid ceesh aan laguu qorin. Gabadhaa dabadeedna waxan aad oga baqaa in aan ku dhiirado dhex gelida dumarka.
Ee laakiin adigu waad iga nasiib wanaagsan tahay maadaama aad heshay qof kula wadaaga nolosha sideedabana guurku waa nasiib wakhtigan aynu joognana way adag tahay sida aad u hesho qof aad la qaybsato ama aad la wadaagto nolol, markaa wallaal anaa og dhibaatada ay leedahay kelinimadu, qof xun oo aad haysataana wuxu dhaamaa wax la'aanta, waxaanan wallaal kugula talinayaa maadaama uu inankaasi si wanaagsan kaa yeelay markii hore, ehelna tihiin oo abtigaa dhalay sidoo kalena ilaa hadda uu kugu xidhan yahay meherkiisu waa in aad is dhawrto, isu aragto xaas, una dul qaadato dhib kastoo kaaga timaada dhinaciisa, waxa aad reer arkayso ee dhisani mid waliba sidaadan oo kale ayuun buu ku bilaabmay iyadoo ay sidaa tahay haddana wuxuunbaa guulaysta labaada qof ee nolosha ka adkaada markaa wallaal anigaa maanta garan lahaa haddaan gabadh haysto ee waxan kugula talinayaa in aanad si dhib yar uga bixin xayndaabka quruxda badan ee ah guurka."
Inta uu subeer waday hadalka ku saabsan waanada, wanaag faristaj iyo u caqli celinta Salma way karaahiyeysanaysaa mawduuca waanada ah ee ku saabsan arrinta Mursal iyo iyada u dhexaysa, waxaanay ka doorbidaysay in ay ka qaadato warqadeeda maadaama aanay markii horeba u guursan jaceyl ee uu ahaa mid ku yimi nasiib iyo calafka oo meesha ka adeegaya waxaana ugu xiiso badnaa erayadaa uu subeer ku lahaa in ay ka hesho kuwo kale oo la xidhiidha iyada iyo Subeer waayahoodii jaceyl iyo wakhtigii ay soo mareen iyo waxa ay hadda yeeli doonaan.
Sidaa darteed waxay mar walba ku dedaalaysaa inay Subeer ku soo dabaasho sheekada cusub, waxaana erayadeeda ka mid ahaa: “Wallaal Subeeroow aniga iyo Mursal way noo kala dhamaataye, iska dhaaf arrintayada iyo hadal haynteeda oo inoo wad sheekadeena.”
Salma waxay aad u xiisaynaysaa sheekada cusub ee dib ugu bilaabantay iyada iyo Subeer, waxayna Subeer kor iyo hoosba ugu dhigaysaa hadalo sarbeeb ah oo ay ku abuurayso jawi rabitaan oo dhexmara iyada iyo Subeer.
Subeer iyo Salma waxay Telefoonka dhegta hayaanbka waxay saacaddu gaadhay 1:30-kii habeenimo, Dabadeedna Salma ayaa tidhi: “Wallaal Subeeroow, waan ku hurdo seejiyey iga raali ahaw, waana inoo habeen dambe, waynuna wada cashaynaynaa oo anigaa ku casuumay.”
Inkastuu u arkayey in ay tahay gabadh soddoh ah oo laga wanaagsan yahay in lagu arko ag joog joogeeda haddana Subeer wuxu ku jawaabay: “Waayahay Wallaal, isagoo tixgelinaya xidhiidhkii jaceyl iyo wallaaltinimo ee wakhtiyada qaar ka dhaxayn jiray walow ay yar tahay dad sidaa wax u qadariyaa haddana waxan odhan karnaa subeer wuxu ahaa wiil Illaaahay ku manaystay Iimaan, Samir, Dulqaad iyo Deeq oo umaba arkaba in wax dhibaato ah ay u geysatay gabadhan Salmi iyadoo ay arrintani ahayd mid aayahiisa, noloshiisa iyo dadnimadiisaba meel kaga dhacday oo uu ku dhawaaday in loo dhigo Cusbitaal ama lagu xidho mid ka mida jeelasha dadka waal waalan haddana isaga oo yaqiinsan Illaahay ayaa wax walba wuxu ku dhaafay aaminaada Alle iyo samirka aan cidna loola simin ee Illaahay ugu deeqay.
Intaa ka dibna waxay is yidhaahdeen "macasalaama" wayna dhigeen telefoonadii.
Telefoonka ay saacadaha badan kula hadashay Subeer, waxay Salma xusuusisay waayihii caashaq ee waqti hore dhexmaray iyada iyo Subeer, taasina waxay keentay inay Salma markii ay Telefoonka dhigtay sariirteeda dusheeda gal-galato, iyadoo uu qalbigeedu dib u soo fadhayo xusuusta Subeer iyo waqtigii ay isla soo mareen Subeer.
Dhinaca kale ninkii Subeer habeenkaa waxa casho u noqotay sheekada Salma, sidaa darteed markii uu telefoonkii dhigay ayuu deg deg isu tuuray isaga oo ilawsan cunaba, xataa habeenkaa wuxu Subeer ilaaway inuu sariirtiisa ku seexdo, sidaa darteed markii uu waagii beryey ayuu is arkay isaga oo ku jiifa mid ka mid ah furshaanka dhuudhuuban ee fadhiga qolkiisa.
Sidoo kale habeenkaa, wuxu Subeer ku seexday shaadhkii iyo surwaalkii uu ku lebisnaa maalinimadii iyo xataa kabihii.
Ilowshiyaha intaa le'eg ee subeer ku dhacay ma ahayn mid naftiisu dareentay ama u jan jeedhsantay xaga Salma balse waxa ka yaabiyay sida ay u wada hadleen isaga iyo Salmi iyadoo uu mar walba ka door bidayay in uu iska fogeeyo, subeer ma aha nin u bartay soo jeedka habeenkii waxaanu habeenkii inta badan seexan jiray inta ka horaysa tobanka taasi waxay keliftay in uu ku dhaco ilowshiyaha intaa le'eg.
markii ay qoraxdu soo baxday ayuu Subeer iska beddelay dharkii uu ku seexday oo dhar kale ku lebistay, ka dibna shaqo tagey.
Maalintaa habeenimadeeda waa habeenkii ay Salma casuuntay Subeer, waxayna balameen 7:30-kii fiidnimo. Sidaa darteed abaaro 5:00 galabnimo ayey Salma isu diyaarisay qaabilaada Subeer, waxayna noqotay istaanbay, iyadoo ku lebisatay dharkeeda intii ugu quruxda badnayd.
Salma ilaa maqribkii waxay ku mashquulsanayd lebis iyo isdiyaarrin, inkasta oo ay Salma lebisatay dharkeeda intii ugu quruxda badnayd, haddana saaxiibadeeda la talinaysa oo ah muraayada la isku daawado ayaa marba tusaysay waxa ka khaldan, markaas ayey dib u hawgaleysay, waxayse aakhirkii Salma iyo la talisadeedu isla go’aansadeen bedlad isu eg oo aad u qurux badan.
Goor ay abaaro 6:00 maqribnimo tahay ayey Salma iyadoo diyaar ah debeda uga soo booday qolkeedii, balse iyadoo aan dhaafin daaraha guriga ayuu telefoon soo dhacay.
Telefoonka waxa soo diray Salma odaygeedii Mursal, waxaana telefoonka qabtay Salma hooyadeed Ruun oo Mursalna Eddadii ah.
Mursal, wuxu hadalkiisa ku bilaabay: “Eddo Ruun waa Mursale iska warrama.” Hooyo Ruun ayaa u celisay, “Eeddo Mursal aad baanu u wanaagsanahay ee idinkuna iska warama.”
Hooyo Ruun iyo Mursal markii ay is dhaafsadeen salaan iyo waxoogaa xaal waraysi ah, ayuu Mursal yidhi: “Eeddo Ruun, ma joogtaa Salma.”
Islaantii Ruun intii aanay u jawaabin Mursal ayey u yeedhay Salma oo ay tidhi: “Salmaay soo carar.” Salma aad bay u karaahiyeysanaysay yeedhmada hooyadeed oo way ka naxday, waayo waqtigii ay la balantay Subeer, ayaa kaabiga u soo saaran, laakiin markii hooyadeed telefoonka ugu yeedhay way soo carartay.
Salma markii ay telefoonkii kor u qaaday ee ay dhegta saartay ayuu Mursal yidhi: “Salma waa Mursal iska waran, ma fiican tahay, xaaladadu waa sidee ma xiisaynaysaa inaad Jarmalka ku soo noqoto, mise waad nacday.”
Mursal qader dhawr miridh ah ayaanu Salma wax fursad ah siin oo uu hadal xidhiidh ah boobsiiyey, wuxuna hadalkiisa ku soo afjaray, “Wallaal anigu aad baan u fiicanahay muddadii aad iga soo maqnaydeena waxa ii dhashay ilmihii saddexaad ee ay ii dhasho xaaskaygii aanu isku noqonay ee carruurta waaweyn ii lahayd, ilmaha ay hadda ii dhashayna waa wiil, iyadu aad bay u wanaagsan tahay ee adigu iska warran wallaal.”
Salma aad bay uga xanaaqday waxyaalaha faraha badan ee isu dabo dhigay, waxay hoosta iska odhanaysaa "tolow ma wuxuu kuugu faanayaa inuu dhaqan yahay oo carruur badan dhalay iyo inuu naagtiisa jecel yahay."
Salma hadal badan kama sii gurin Mursal, waxayna si taxadir leh u siinaysaa jawaabo kooban, iyado odhanaysa, “Wallaal ma jecli in aan telefoonka wax xumaan ah kaa idhaahdo, balse haddii aad jeceshahay wanaageena wax kale kaama rabo’e warqadaydii ii soo dir, ta kale anigu weligay ku soo noqon maayo Jarmalka.”
Mursal aad buu u qoslay, waxaana Salma afkeeda ugu soo baxay kelmad uu doonayey oo ah isoo fur, taasoo uu iska diidayey inay dhinaciisa ka timaado oo aan hadhow lagaga caban, laakiin waqtigan ay Salma waraaqda waydiinayso Mursal wayba ka furan tahay oo waraaqdeedi furiinku waxay ku jirtaa khaanada kabadhka Mursal, wuxuna qoray 15 maalmood ka hor intii aanay Hargeysa iman, waqtigaas oo uu goostay inuu furo. Sidaa darteed Mursal, wuxu Salma ugu jawaabay, “Wallaal waxba taa ha ku xiiqin mar hore ayaan go’aansaday in aan ku furo, warqadaadii furniinka gacanta ayaan ku hayaa, isla caawa ayaana faakis (Fax) kuugu soo dirayaa.
Ta kale lacagtaadii meherkana waanba soo diray oo waxay la socotaa lacag Islaanta Ruun ee Eddaday aan u soo diray oo hadda xawaaladda taal. Sidaa darteed Wallaal Salmaay sidaa ku abshir dheh.”
Intaa dabadeedna waxay Salmi ugu jawaabtay weedhahan, “Wallaal Mursalow marna Xumaan uma qabo furiinka aad isoo furtay, laakiin hadalkaaga oo dhan hadda kama wada jawaabi karayo oo waxa ii taal hawl aan fursad ii ogalayn ee habeen dambe hadahan oo kale ila soo hadal.”
"waayahay iyo waayahay" inta la isdhaafsaday ayey Salma telefoonkii isa saartay.
Hooyo Ruun oo qolka Telefoonku yaalo hortiisa fadhiday, ayaa isha ku dhufatay Salma oo qolku ka soo booday, iyadoo faraxsan, dabadeedna waxay hooyo Ruun gabadheedii Salma ku tidhi: “Hooyo Salmaay waadigan faraxsane muxuu kugu yidhi inaabtigaa ama odaygaagii, ma wuxuu kugu yidhi waan kuu imanayaa, mise lacag buu kuu soo diray.”
Salma iyadoo hooyadeed Ruun agtaagan oo aan weli uga jawaabin su’aashii ay weydiisay ayaa albaabkii gurigala la soo garaaacay, waxaana qofkii garaacayey ka furtay gabadh shaqaale ah oo guriga joogta. Qofkii guriga laga furay, wuxu noqday gabadh yar, waxayna gabadhii yarayd tidh: “Salma ma joogtaa.” Haa baa loogu jawaabay, dabadeedna waxay gabadhii yarayd haddana tidhi: "wallaal iigu yeedha."
ka dibna gabadhii yarayd ayaa Salma u sheegtay fariin oo ku tidhi waa lagu doonayaa.
Salma intay si deg deg ah u dhaqaaqday ayay hooyadeed ku tidhi: “Hooyo aroos baan tegayaa oo waan ka habsaamaye ee waa inoo soo noqodka." intaa ka dibna Salma albaabka ayey ka booday.
Salma markii ay gurigooda debedda uga soo baxday aay intaanay meel kale eegin ayay si deg deg ah u daymootay goobtii ay Subeer ku balameen oo gurigooda u muuqata, waxayna isha ku dhufatay baabuur yar oo ah nooca tagaasida loo yaqaan oo midabkiisu cad yahay, laakiin gabadhii yarayd oo weli Salma la joogta ayaa ku tidhi: “Qofka ku doonaya ee ii kaa soo diray, wuxu ku jiraa baabuurka yar ee halkaa taagan gudihiisa.”
Salma intay deg deg uu soo dhaqaaqday ayey u timi baabuurkii, saa waxa dhexfadhiya Subeer oo yaaban oo ilaa 40 daqiiqo sugayey.
Salma intay tidhi: "wallaal iga raali ahaw" ayay baabuurkii fuushay, waxayna Subeer uga cudur daaratay sababta ay u habsaantay, waxayna tidhi: “Wallaal Subeerow wax kale kaagamaan habsaamine waxa telefoon igula soo hadlay ninkii iqabay ee aanu ilmaabtiga ahayn oo aanu indoora telefoonka ku wada hadlaynay, wuxuna isoo garaacay xilligii uu soo dhawaa waqtigii ballanteenu markaa iga raali ahaw.”
Subeer baa isna ugu hal celiyey, “Wallaal Salma waad mahadsan tahay raaligelinta aad i raali gelisay, sababta aad u habsaantayna waa mid macquul ah ama muhiim ah.”
Intaa markii la is dhaafsaday ayuu baabuurkii meeshii taagnaa uga dhaqaaqay jihada waqooyi oo ah meesha uu ka xigo hudheelka u qorshaysan inay ka wada casheeyaan. Casuumadda cashada waxa fidisay Salma, maalinimadii ayeyna soo balamisay, dabadeed markii ay hal cabaar ah ka socdeen goobtii ballanta ee ay isugu yimaadeen ayay albaabka ka galeen hudheelkii, baabuurkii ayay dhigeen meel baarkin ah ka dibna waxay badhida la heleen labo kursi iyo miis gaar ah oo loo sii diyaariyey, waxaana miiska iyo kuraasta loo dhigay buqcad gaar ah oo aanay cidi u dhawayn oo weliba qurux badan oo ay dhir cagaar lihi ku hadoodilan tahay ayna u ifayso xabad guluub ah oo iftiinkeedu u egyahay midabka cadceed godka sii gelaysa.
Salma iyada ayaa qaabilaada iyo maamulka casuumadda leh, maadaama ay iyadu wax casuuntay. Goobta ay fadhiyaan waxa ka dhacaysa laydh macaan, waxaana sanka qofku urinayaa caraf iyo udgoon, waayo waxa dhacay waxoogaa foore ah oo aan dhaxan iyo dhiif kulayl midna lahayn, isla markaana waxa kaamboolka hudheelka dhexdiisa ku yaal dhir aad kaymo moodo oo kala nooc-nooc ah, iyadoo dhirtaasi isugu jirta qaar la beeray iyo qaar dabiici ah intaba.
Sidaa darteed marka la isku darro dhirta kala nooc-nooca ah iyo nalalka kala jaad-jaadka ah ee ku sharaxan kaamboolka hudheelka waxa qofka goobtaa soo dhex fadhiista ku filan il-doogsiga iyo muuqaalka qalbiga u roon ee meesha yaal, isla markaana waxay dareenka qofka ilowsiinaysaa xusuusta wixii dhibaato ah ee soo maray.
Subeer iyo Salma intii cuntada loo soo aggaasimayey, waxay mararka qaarkood ku mashquuleen daawashada quruxda goobta ay fadhiyaan, balse inta badan iyagaa isku mashquulsanaa, waayo waxay isdhaafsanayeen sheekooyin iyo su’aalo goo-goos ah oo ay isku xaal warreysanayaan.
Subeer inkasta oo uu xiisa u qabay inuu Salma waydiiyo wax walba, haddana wuu ka xishoonayey inuu Salma weydiiyo su’aalaha qaarkood, waayo uma arko gabadh madaxbannaan oo uu la haasaawayo sidii wakhtiyada qaarkood, balse wuxu u arkaa inay tahay qof xaas ah oo ay keliya ka sheekaysanayaan macruufad qadiim ah iyo muxubaddii wallaalaysay waqti waqtiyada ka mid ah.
Cashadii oo ka kooban cuntooyin kala nooc nooc ah ayay shaqaalihii hudheelku marba qaar miiska soo dhigayaan, laakiin Salma iyo Subeer iyagaa isku mashquulsan oo ma oga waxa ka socda miiska dhexdooda yaal.
Hase yeeshee goor dambe oo ilaa nusa-saace laga joogo markii cuntada loo soo dhammeystiray ayay ku baraarugeen miiskii oo buuxa oo aanay waxbka ka dhinayn wixii ay dalbadeen.
Dabadeedna cuntadii bay ku foorarsadeen, laakiin inta la aamusay cuntadii oo qudha lama wadaagine, waxa la isku dhexwaday cuntayntii iyo sheekadii, qosol yar yar, weedho macaan iyo milicsi dareen leh, ayaa la wadaagay, waxaana lagu wada casheeyey dareen farxad leh iyo qaabilaad xurmo ku dheehan tahay.
Hase yeeshee Salma iyo Subeer markii ay cuntadii ka fan jeediyeen miiskii cuntada may sii fadhiyin ee deg deg ayay uga kaceen, laakiin haddana may tegin oo hudheelkii kama ay bixin. Cajeb! Oo haddii ay miiska ka kaceen meeshiina aanay ka tegin, isla markaana ay casheeyeen oo ay miiska ka dulkaceen, tolow, maxay sameeyeen?
May tagin meel kale manay ka bixin hudheelka ee waxay u digo rogteen agagaarka mutulkii ay fadh fadhiyeen halkaas oo loo dhigay kuraasi ay ku cabaan cabitaan.
Muuqaalka yaabka leh ee hudheelka iyo cuntooyinka la soo hor dhigay iyo guud ahaanba bilicda iyo hannaanka adeeg ee hudheelka Subeer aad buu ula yaabay, waxayna ku noqotay wax cusub, waayo muddo dheer ama weligiiba casho, qado iyo quraac toona uma doonan hudheel, wuxuna saddexda waqti ee cuntada iska xaadirin jiray gurigooda oo aanu weligii ka habsaamin maadaama aanu lahayn mataan uu la soo casheeyo amaba aanu yeelan guri kale oo uu kaga maarmo ka hooyadii.
Subeer iyo Salma markii ay fadhiisteen miiskii ay uga digo rogteen miiskii cashada, waxay halkii ka sii waden sheekooyinkooda la xidhiidhay is xaal waraysiga.
Salma ayaa ugu horreyn sheekada qaatay, waxayna Subeer uga warantay wadahadalkii dhexmaray iyada iyo odeygeeda Mursal galabnimadii markii uu telefoonka kula soo hadlay, waxayna tidhi:
“Subeerow, wada hadalkii galabta telefoonka nagu dhexmaray aniga iyo odaygayga Mursal, wuxu ku saabsanaa sidii aanu u kala tegi lahayn, aniguna waxaan markiiba u qadimay inuu warqadaydii ii soo diro, isla markaana waxaan u sheegay in aanan dib ugu soo noqnayn Jarmalka.
Salma markii ay halkaa sheekada marinaysay, ayaa Subeer oo si dhugmo leh u dhegaysanayey hadalka Salma, wuxu ku hal celiyey,
“Wallaal Salmaay, maxaa kugu kelifay inaad gurigaaga dumiso oo aad odaygaaga ku khasabto in uu ku furo, maad reerkaaga iska dhaqatid oo iska daysid kala taga iyo furiinka, horaa loo yidhi Reer hadda la dhisayaa ma gaadho reer hore u dhisnaa, Soomaaliduna waxay tidhaahdaa reer saaka talo guuray reer galabta soo guuray ma gaadho. Sidii uu markii horeba telefoonka uga sheegay ayuun buu markana ugu waaniyay in aanay ku deg degin furitaanka.
Sidaa darteed hadda waxaad tahay Marwo la qabo, laakiin haddii aad arrintaa ku adkaysato oo aad sidaa isku furtaan odaygaaga berito waxaad yeelanaysaa naanays kale, taas oo laguugu yeedhi doono hebli waa Carmal ama waa garob iyo waa tii la furay, markaa anigu Subeer ahaan, waxaan mar walba kugula talinaya inaad odaygaaga deysato oo aad u dulqaadato wixii xumaan iyo dhibaato ah ee aad ka tirsanayso iyo haddii ay hadda ka dib xumaan kale idin kala gaadho.”
Salma ayaa haddana hadalki qaadatay, waxayna tidhi:
“Subeerow, wallaal taladaada waxan u qaadanayaa nasteex iyo in aad tahay qof wanaageyga jecel, laakiin horaa loo yidhi niyad kaa sii jeeda lama soo jeedin karo, taas oo macnaheedu yahay inaan niyada qofka lagu khasbi Karrin meel aanay rabin, aniguna kum qanci karo, naftana kuma khasbi karo wax aanan rabin, markaa Subeerow wallaal iga daa ninkaa iyo hadalkiisa, waayo wax kasta oo aad igu tidhaahdo ama aynu iska nidhaahno ninkaa iyo arrintiisa, waxba ka beddeli mayso niyadayda, taladayduna marna noqon mayso inaan ninkaa ku noqdo, isaguna hadda wuu ogyahay inaanu kala raja go’nay, welibana waxaan kuu sheegayaa inuu ii sheegay inuu habeen dambe ii soo dirayo warqadaydii furiinka, lacagtii meherkaygana wuuba soo diray oo wuxu markii dhawayd ee uu telefoonka igula soo hadlay iigu sheegay inay lacagtii meherkaygu xawaaladda Hargeysa taal.
Balse waxaan Subeeroow adiga ku weydiiyey, Hadda halkee buu xalkaagu marayaa, goormaadse ku talo jiraa inaad guursato oo aad xaas iyo reer yaalato?"
Subeer oo hal cabaar ah aamusnaa, si degana u dhegaysanayey doodda iyo hadalada Salma ayaa hadalkii la wareegay, wuxuna yidhi:
La Soco Qaybta 9aad